नेपालमा व्यावसायिक फुटबलको अवस्था दयनीय | KhelkudNepal.com
नेपालमा व्यावसायिक फुटबलको अवस्था दयनीय
पुरुष खेलाडीले विदेशमा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहे पनि महिलाका लागि भने त्यो अवसर कम मात्रै आउने गर्छ । महिला खेलाडीका लागि त्यस्तो अवसर बिरलै प्राप्त हुन्छ । पहिलो पटक यो अवसर प्राप्त गरेका छन् स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले ।
एपीएफमा आबद्ध उनीहरु अब भारतको महिला लिग क्लब सेतुबाट मैदान उत्रिनेछन् । सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो नम्बरमा रहेकी सावित्रासँग लिग योजनाबारे रेखा शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
व्यावसायिक लिगका लागि आबद्ध हुनुभएको छ । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
हाम्रो लागि पहिलो अवसर हो । पहिलो पटक व्यावसायिक लिग खेल्दैछौँ । त्यही भएर एकदमै उत्साहित छु । केही गरेर देखाउनु पर्नेछ । पाएको अवसरलाई सदुपयोग गरेर आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्नेछ ।
समग्रमा एकदमै खुसी छु । यो नयाँ उडानले आगामी दिनमा जुनियर बहिनीहरुका लागि पनि बाटो तय गरोस् भन्ने लागेको छ ।
अहिले भारतमा तपाईं आबद्ध भएको क्लब कस्तो हो ?
सेतु फुटबल बल भारत तमिलनाडुको टोली हो । गत सिजनको उपविजेता टोली पनि हो । गत सिजन फाइनलमा हारेको टोली भएर हामीसँग क्लबले धेरै अपेक्षा गरेको छ । सेतुका खेलहरु पनि राम्रा छन् । क्लब राम्रो छ । खेलाडी पनि राम्रै आबद्ध छन् । अब हामीले खेलेपछि केही नयाँ नतिजा दिनुपर्छ ।
त्यो क्लबमा कसरी आबद्ध हुनुभयो ? कसको सहयोग रह्यो ?
पाचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप अघि भारत उडिसामा भएको हिरो वुमेन्स गोल्डकपमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा आबद्ध हुन सजिलो भयो । त्यहा रहँदा क्लबका पदाधिकारीले हामीलाई छनोट गरे । पछि पाचौं साफको खेलबाट राम्रो लागेपछि आबद्धका लागि अफर आएको हो । यसमा महिला टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्का सरले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँले सेतुको सीईओसँग कुरा फाइनल गर्न सहयोग गर्नुभयो । हरि खड्का सरले गर्दा हामी पहिलोपटक व्यावसायिक लिगतका लागि आबद्ध भएका हौं ।
व्यावसायिक रुपमा विदेशी क्लबबाट खेल्दा कस्ता चुनौती कस्ता आउलान् जस्तो लागेको छ ? अनि अवसर पनि त होलन नि !
हाम्रा लागि एकदम ठूलो अवसर हो । अनि चुनौती छ । यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने । कस्तो प्रदर्शन गर्ने भनेर । जुनसुकै क्लबमा आबद्ध भएपछि या भनम घरेलु वा विदेशी जे भए पनि मैदानमा उत्रिएपछि एउटा खेलाडीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं । मैदान पुगेपछि खेलाडीको सपना बेग्लै हुन्छ त्यो सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्नेछौं । क्लबले म माथि लिएको विश्वासलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नेछु । सुन्दर अवसरलाई सक्दो सदुपयोग गर्नेछौं । खेर फाल्नेछैनौं ।
विदेशी क्लबबाट खेल्दै गर्दा नेपाली समर्थकहरुलाई तपाईंको सन्देश के हो ?
घरेलु मैदानमा पाउने जति पनि माया र साथ पाएको छु । त्यसले निकै उत्साहित बनाएको छ । प्रदर्शन पनि सुधार हुँदै गइरहेको छ । अब बिदेशी क्लबमा खेल्दैछौं । यसमा पनि समर्थकको माया पाउनेमा विश्वस्त छु । भारतमा रहँदा पनि माया र साथ पाउनेमा विश्वस्त छु ।
मैदान बाहिर वा भित्र समर्थकको मायाले निकै उत्साहित बनाउँछ ।
तपाईंसँगै अनिता बस्नेत पनि क्लबमा आबद्ध हुनुभएको छ ? दुबैजना सँगै हुँदाको फाइदा के हो ?
दुबै जना सँगै हुँदा निकै सजिलो हुन्छ । हामी दुबैजना एउटै क्लबमा आबद्ध छौं । एपीएफ होस् वा राष्ट्रिय टिममा हामी सँगै खेलिरहेका छौं । एकअर्काको खेल र स्प्रिटमा जानकार छौं । उसले कस्तो खेल्छ र मैले कस्तो खेल्छु रिड गरेका छौं । यसले खेल्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा व्यावसायिक फुटबलका लागि के हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा व्यावसायिक फुटबलको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय टोलीले अब के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिताको माहोल नै छैन । जिल्लामा कति खेलाडी छन् । सबैको क्षमता बुझेर प्रतियोगिता गर्दा धेरै राम्रा खेलाडी उत्पादन हुने अवस्था छ । तर क्षमताको मुल्याङकनका लागि प्रतियोगिता नै छैन ।
लिग लामो समयको हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा वुमेन्स लिग एक हप्ताको मात्रै हुन्छ । लिगले खेलाडीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
पहिलेदेखि घटेको घटना जस्तो छ एकहप्ते लिग । एक हप्तामा सक्ने नियम जस्तो भएको छ । सुधारका लागि पहल भएको छैन । एक साताको लिग निरन्तर खेलाइन्छ । खेलाडीलाई आराम पुग्दैन । एक सातामा खेलाडीले आफनो प्रदर्शन पनि देखाउन सक्दैन । धेरै खेले ५ वटा खेल खेलिन्छ यसमा राम्रो अनुभव पनि हुँदैन ।
खेलाडीलाई आफनो प्रदर्शन सुधारको मौका पनि हुँदैन । त्यसले एन्फाले जतिसक्दो महिला लिगमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । यस्तो लिगले महिला फुटबलको विकासको के अपेक्षा गर्ने ।
महिला भएका कारणले आफूलाई शारीरिक रुपमा लामो समयसम्म फिट राख्न निकै गाह्रो हुन्छ भन्छन् तर तपाईंमा त्यस्तो देखिँदैन, यसको रहस्य के हो ?
शारीरिक रुपमा फिट राख्न गाह्रो छ । नियमित अभ्यास नै हो । अभ्यासमा अभ्यस्त हुने । नियमित अभ्यासमा केन्द्रित हुने । ट्रेनिङको तालिकाअनुसार आफुलाई तयार राख्ने । कुनै बेला गाह्रो ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तयार बस्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली महिला फुटबलको अवस्था र भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
भविष्य राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाए महिला फुटबलले केही गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गरेका छौं । ओलम्पिक छनोटको पहिलो चरणमा राम्रो भयो । हिरो वुमेन्स गोल्डकपमा भारतलाई हरायौं । साफमा पनि राम्रो कोसिस गरेका हौं । घरेलु प्रतियोगिता छैन । त्यसैले धेरै राम्रो गर्न सकिँदैन । वर्षमा हुने एकाध प्रतियोगिताले स्तर सुधार्न सकिँदैन । धेरै प्रतियोगिता र एक्सपोजर पाए महिला फुटबलको भविष्य सुन्दर छ ।
नेपालमा मनपर्ने तपाईंको फुटबल आइडल को हुन् ?
मेरो फुटबल आइडल अनु लामा दिदी हो । म एपीएफमा आबद्ध भएदेखि दिदीबाट धेरै कुरा सिकेको छु । उहाँको खेल कौशल, खेलाडीलाई गर्ने व्यबहार र टिमलाई गर्ने मोटिभेट लगायतका बिषय उहाँबाट सिकेको छु । खेलाडीमा देखाउने व्यवहार र उत्साहले अझै सजिलो बनाएको छ ।
तपाईंको सेलिब्रेसन रोनाल्डोकै स्टाइलको हुन्छ, किन ?
किनकि म रोनाल्डोको सकर्थक हुँ । ४ वर्ष भयो रोनाल्डोलाई फलो गर्न लागेको । मेरो वेष्ट हो रोनाल्डो । त्यही भएर सेलिब्रेसन पनि रोनाल्डो स्टाइल आउँछ । विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी भएकाले उनका गतिविधिमा म पनि अपडेट छु ।
झट्ट हेर्दा तपाईं केटा जस्तै देखिनुहुन्छ ? साथी भाईले कत्तिको जिस्क्याउँछन् ?
बाल्यकालदेखि नै मेरो स्टाइल हो । म केटी हो लजाएर हिड्नुपर्छ भन्ने कहिले आएन । पहिलेदेखि नै यस्तो स्टाइल गरी हिडेँ । त्यसैले जिस्क्याउने आँट गर्दैनन् ।
नेइमारलाई आफ्नै प्रशिक्षकले गरे आलोचना
फ्रेन्च कपको फाइनल सकिएपछि मैदानबाट बाहिरिने क्रममा एक फ्यानसँग विवाद गरेपछि पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का प्रशिक्षक थोमस टुसिलले आफ्ना स्टार स्ट्राइकर नेइमार जुनियरको आलोचना गरेका छन्। फेन्च कप फाइनलमा २-० को अग्रता गुमाउँदै २-२ को बराबरी पछि पिएसजी रेन्नेसविरुद्ध पेनाल्टीमा ६-५ ले पराजित भएको थियो। खेलपछि भिडियो खिच्दै गरेका १ […]